ရတနာပုံတက္ကသိုလ်တွင် ဆိုင်ကယ်ရပ်နားခ ကောက်ခံရရှိငွေများကို တက္ကသိုလ်ဖွံ့ဖြိုးရေး လိုအပ်ချ?? - Yangon Media Group
ရတနာပုံတက္ကသိုလ်တွင် ဆိုင်ကယ်ရပ်နားခ ကောက်ခံရရှိငွေများကို တက္ကသိုလ်ဖွံ့ဖြိုးရေး လိုအပ်ချ??
မန္တလေးမြို့၊ အမရပူရမြို့နယ်ရှိ ရတနာပုံ တက္ကသိုလ်တွင် ဆိုင်ကယ်ရပ်နားခ ကောက်ခံရရှိသော ငွေများအားတက္ကသိုလ် ဖွံ့ဖြိုးရေးလိုအပ်ချက်များတွင်သုံးစွဲရေး၊ သန့်ရှင်းရေး ဝန်ထမ်း တိုးမြှင့်ချထားရေးနှင့် တက္ကသိုလ်အတွင်း လုံခြုံရေးတာ ဝန်အပြည့်အဝလုပ်ဆောင်ပေးရေး တို့နှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြထားသော်လည်း အဆင်ပြေမှုမရှိသောကြောင့် ရတနာပုံတက္ကသို လ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ(ဗကသ) များအဖွဲ့ချုပ် မှဦးဆောင်ကာ နိုဝင်ဘာ၂၉ရက်၊ မွန်းလွဲ၂နာရီအချိန်က တက္ကသိုလ်ဝင်ပေါက်ရှေ့၌ ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုမှုတစ်ရပ်ကို ပြုလုပ်ကြ ကြောင်းသိရသည်။
”ရတနာပုံတက္ကသိုလ်မှာ လက်ရှိဆရာ၊ ဆရာမ(၇ဝဝ)ကျော်နဲ့ တက်ရောက်သင်ကြားနေ တဲ့ကျောင်းသားကျောင်း သူ၂၅ဝဝဝ ရှိပေမယ့်လို့ လုံခြုံရေးနဲ့သန့်ရှင်း ရေးဝန်ထမ်းအရေအတွက်က ၃ဝ ဝန်းကျင်သာရှိတဲ့အတွက် ကျောင်း ဆောင်တွေနဲ့ သန့်စင်ခန်းတွေရဲ့၊ လုံခြုံရေးနဲ့ သန့်ရှင်းရေးကဏ္ဍတို့ဟာဆိုရင် တက္ကသိုလ်တစ်ခုရဲ့ အင်္ဂါရပ်နဲ့ မပြည့်စုံတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပေါ်နေလို့ အခုလိုမျိုး တောင်းဆိုရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ တောင်းဆိုတဲ့ဟာက ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန လက် အောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ အနေ နဲ့ အဲဒီဌာနကိုစာပို့ပြီးတော့ ညှိနှိုင်းသွားမယ်လို့ ပြောထားပေမယ့် ဘာမှထူးခြားတဲ့ အကြောင်းပြန်မှုတစ်စုံတစ်ရာမရရှိပါဘူး။ ဆိုင်ကယ်စတန်းကနေရရှိတဲ့ လေလံ ငွေတွေကိုလည်း ကျောင်းမှာ ပျက်စီးနေတဲ့ သန့်စင်ခန်းတွေကို ပြန်လည်ပြုပြင်ဖို့၊ သန့်ရှင်းရေးနဲ့ လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေ ခန့်အပ်ရာ မှာသုံးစွဲဖို့နဲ့ ကျောင်းအတွင်းက အားကစားအသင်း အဖွဲ့တွေနဲ့ အနုပညာအသင်းတွေ အတွက် သုံးစွဲပေးဖို့အတွက် မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်ဆီကို တောင်းဆိုထားပြီးဖြစ်ပါတယ်”ဟု ရတနာပုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ(ဗကသ) များအဖွဲ့ချုပ် မှ စည်းရုံးရေးမှူး ကိုရဲမျိုးဆွေက နိုဝင်ဘာ၂၉ ရက်တွင် ဒီမိုကရေစီ တူဒေးသို့ပြောကြားသည်။
ရတနာပုံတက္ကသိုလ် ကျောင်း သားများသမဂ္ဂ(ဗကသ)များအဖွဲ့ ချုပ်အနေဖြင့်ပြီးခဲ့သည့် နိုဝင် ဘာ(၂၇) ရက်နေ့က ဆိုင်ကယ်ရပ် နားခ ကောက်ခံရရှိသည့်ငွေများ အား တက္ကသိုလ်ကျောင်းဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေးလိုအပ်သည်များတွင် သုံးစွဲရေးကိစ္စကို တင်ပြဆွေးနွေး နိုင်ရန် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ရုံးသို့ သွားရောက်ခဲ့ရာ တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်နှင့် မတွေ့ခဲ့ဘဲ တိုင်းဒေသကြီးလျှပ် စစ်၊စွမ်းအင်နှင့် ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဦးဇာနည်အောင်နှင့်သာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ”ဒါက ကျောင်းရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှု နဲ့အညီ အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန နဲ့ ကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စပဲ။ ကျောင်းသားတွေအဆင် ပြေဖို့ဆိုတာ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ မိဘသဖွယ်စဉ်း စားပေးတာပါ။ တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့မှာ တာဝန်မရှိဘူး။ အဲ့ဒါကိုကျောင်းသားတွေက အ ကြောင်းမပြန်လို့ အခုလိုလုပ် ဆောင်တာသည် လုံးဝသင့်တော် တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ ဒါပဲပြောချင် တာပါ”ဟု တိုင်းဒေသကြီးလျှပ် စစ်စွမ်းအင်နှင့် ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီး ဦးဇာနည်အောင်ကပြော ကြားသည်။
ရတနာပုံ တက္ကသိုလ်အတွင်း ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများထံမှ ဆိုင်ကယ်ရပ်နားခ ကောက်ခံရရှိ သည့်ငွေမှာတစ်နှစ်လျှင် ကျပ်သိန်း ၄ဝဝ နီးပါးလေလံရရှိနေ သည့်အတွက် ယင်းငွေများသည် ကျောင်းလုံခြုံရေး၊ သန့်ရှင်းရေး၊ စာသင်ခန်းများတွင် အခန်းတံခါး များပျက်စီးမှု၊ အိမ်သာများလိုအပ် ချက်နှင့်သန့်ရှင်းမှုနှင့် ရေရရှိမှု အားနည်းနေမှုတို့ကို ဖြေရှင်းပေး သွားနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရ သည်။
လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်းခြောက်ဆယ်ကျော်က အမေရိကန်နိုင်ငံသူ ရိုက်ကူးခဲ့သည့် ခြောက်ထပ်ကြီး ဘု?
ပဉ္စမအကြိမ်မြောက် ဒို့ရိုးရာ မုန့်ပွဲတော်ကို စဉ့်ကိုင်မြို့တွင် ကျင်းပ မြန်မာရိုးရာ မုန့်အ
သစ်တော စိုက်ခင်းထွက် သစ်များကို ပြည်ပသို့ အလုံးလိုက် တင်ပို့ခွင့်ပြုမည်
အလုပ်ခွင် အခက်အခဲများ သပိတ်မှောက် တောင်းဆိုနေသည့် KGG အထည်ချုပ်စက်ရုံ အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမာြး?
မန်းရွှေစက်တော် ဘုရားပွဲတော် မန်းချောင်းသောင်ပြင်တွင် မီးလန့်မှုဖြစ်ပွား